Microsoft abanyela na atụmatụ iji chebe Linux megide ikikere patent | Site na Linux
Microsoft esonyela n'atụmatụ iji chebe Linux megide ikikere patent
The Open mepụtara Network (OIN), nke na-achọ ichedo Linux ecosystem site na patent azọrọ, mara ọkwa na Microsoft esonyela ndị òtù OIN.
N'ụzọ dị otú a kwenyere ka ị ghara itinye akwụkwọ ikike ikikere ma nye ohere iji ụfọdụ teknụzụ ikike na oru ndi ozo banyere Linux.
Dị ka onyinye maka ihe kpatara ya, Misrosoft bufere ikike iji ihe karịrị 60,000 nke ikikere ya n'aka ndị OIN.
1 Banyere Open Invention Network
2 Microsoft sonyeere ihe na-akpata esemokwu ya na Linux
Banyere Open Invention Network
Ndi sonyere nke OIN gụnyere ụlọ ọrụ 2.650, obodo na otu Ha abanyela aka na nkwekọrịta ikike maka mgbanwe nke patenti.
n'etiti Isi ndị otu OIN so na okike nke otu patents na-echebe Linux dị ụlọ ọrụ dịka Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu na Sony.
Companieslọ ọrụ ndị ahụ bịanyere aka na ha nweta ohere nke OIN n'aka ha, n'ọnọdụ ọrụ ha ịghara ịza iwu maka iji teknụzụ etinyere na Linux.
Nkwekọrịta dị n'etiti ndị otu OIN metụtara naanị akụkụ nke nkesa ndị agbakwunyere na nkọwa nke usoro Linux ("Linux System").
Ugbu a ndepụta ahụ gụnyere nchịkọta 2728, gụnyere Linux kernel, ikpo okwu gam akporo, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, wdg.
Na mgbakwunye na nkwa nke enweghị mmekpa ahụ, e guzobere patent ọdọ mmiri n'okpuru OIN, nke gụnyere ikike ịzụta ma ọ bụ nyere onyinye metụtara Linux site na ndị sonyere. OIN nke patenti gunyere ihe kariri 1300 patenti.
N'ụzọ dị mkpa, otu n'ime ihe kpatara ọdịdị OIN n'oge ụfọdụ bụ iwu ike Microsoft na Linux.
Karịsịa, Microsoft kwuru na ihe karịrị akwụkwọ ikike 300 nọ na Linux, agbanyeghị na ekpughereghị ndepụta nke ikike ndị a wee jiri ya rụgide ụlọ ọrụ azụmaahịa ma kwubie nkwekọrịta nkwekọrịta.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, nkwuputa patent bidoro na-aga n'ihu na gam akporo yana a nabatara usoro a n'okpuru nchebe nke OIN
Iguzogide Microsoft, Ndị otu OIN zụtara ọdọ mmiri nke patenti gosipụtara otu ụzọ ekwuru maka teknụzụ maka ịmepụta ọdịnaya weebụ dị ike, nke na-atụ anya ntoputa nke usoro dịka Microsoft's ASP, Sun / Oracle's JSP, na PHP.
Microsoft sonyeere ihe na-akpata esemokwu ya na Linux
Ugbu a, Microsoft agbanweela ọnọdụ ya nke ọma ma mee ihe n'akụkụ ndị na-akwado Linux ecosystem na open source software.
Microsoft ugbu a ị kwenyere na ị gaghị eji ikikere gị megide Linux na ngwanrọ mepere emepe, ma ghota usoro mmekorita nke mmekorita dika ihe di mkpa iji meputa ihe ohuru.
Microsoft itinye aka na OIN na-ebelata ohere nke mmebi iwu nke iwu megide ụlọ ọrụ na-eji ma mepụta ngwaahịa mepere emepe, ọ bụkwa ihe mgbaàmà dị mkpa nye ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Bradley M. Kuhn, onye isi oche nke Software Freedom Conservancy (SFC), kwuru na iji gosipụta ezi obi nke ebumnuche ya, Microsoft ga-edozi arịrịọ iji tinye onye ọkwọ ụgbọ ala mepere emepe na kernel Linux.
A na-atụ aro ka ị nyefee koodu n'okpuru ikike GPLv2 +, nke ga-ekwe ka ihe ndị edepụtara na ikikere GPL na mbufe a ga-etinye na ya, yana koodu nke ikike iji ikikere.
Cheta na onye ọkwọ ụgbọ ala na mmejuputa nke exFAT afọ ise gara aga bụ onye Samsung malitere site na GPLv2, mana etinyebeghị ya na akụkụ nke Linux kernel n'ihe egwu nke itinye akwụkwọ nkwupụta Microsoft na patent infringement nke gụnyere exFAT.
Na nbanye n'ime OIN, ọnọdụ ahụ agbanwebeghị, ebe Microsoft etinyeghị na nkwekọrịta ahụ na OIN ikikere metụtara exFAT, nke na-eme ka o kwe omume iji ha dịka ọ na-eme nrụgide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Microsoft esonyela n'atụmatụ iji chebe Linux megide ikikere patent
Choo nje site na usoro iwu na ClamAV
Iwu iji tinye ebe nchekwa gị na Linux